Waxaan isku dayay inaan helo magac mideeya dhammaan kuwa dalka ku diriraya, waana heli waayay wax ay ku midoobi karaan oo aan ka ahayn warlord. Sidaas darteed warlord baan ugu yeeray dhammaantood. Gabaygan gaaban waxaan u hibeeyay dhammaan carruurta ku agoomowday dalka gudihiisa oo weli ay madaafiicdu ku socoto.
Qof walba oo somaliyeed oo meel nabad ah jooga haddii uusan u damqanin carruurta gubaneysa wuxuu la mid noqonayaa dagaal oogaha carruurtiisa dibedda geystay ee qaraxa rasaasta rajda uga dhigay kuwa weli ku dhexjira dagaallada. Damqashaduna ma aha oo keliya in loo rajeeyo in ay ka soo baxaan ee waa in ay noqotaa mid xitaa sidda rajo nabadeed oo samatabixin karta dhallaankaas gubanaya waayo haddii rajadu ay noqoto in dibedda uun la isugu yimaado waxaa dhaboobeysa rajada kuwa dagaallamaya oo dantoodu tahay in dalka ay ka xaalufiyaan wax kasta oo noole ama ma noole ah. Si haddaba qofka Somaliga ah ee waddaniga ah uu uga duwanaado midka dalkiisa burburinaya waa inuu yeeshaa duwanaansho xagga dareenka iyo damiirkaba ah.
Waa inuu aragtidiisu ku ballaariyaa dhammaan carruurta somaliyeed meel kasta oo ay joogto iyo dhibaatada haysata ee uusan ku kobnaanin goofka ay rerihiisu degganyihiin iyo xaaladda qabiilkiisa uu ku jiro. Gabayga waxaan u bixiyay Voice of The Orphan, waana gabay aan ku xusayo 1da luliyo oo beri ah anigoo u hibeeyay agoonta somaliyeed ee waalidkoodina waayay, wax kaloo daryeelana waayay ee kala jooga meel kasta oo ay Somali ku nooshahay oo uu dagaal ka socdo.
Waa agoonki oo la hadlaya kuwa aan ku kala saari waayay habdhaqankoooda dagaal, diin ha sheegtaan ama shaar siyaasadeed ha xirteen,e. wuxuuna ka baryayaa bal in ay wax uun ka xishoodaan, mar haddii ay Allena ka baqi waayeen, damiirkooduna qaban waayay, dadnimadana xurmeynwaayeen. Wuxuu agoonku quud dareynayaa bal in ay tixgelin doonaan maalinta xoriyadda iyo midnimada ee 1da luuliyo oo maalintaas, ay rasaasta iyo qaraxyada joojin doonaan. Isagoo la hadlayaa dagaal oogayaasha waakan gabyga oo ingiriis aan ku qoray una qoran qaab prose ah ama tiraab-xigeen.
I plead with you, warlord
You have waged a war
You have changed colours
You took up the gun hard-heartedly
You have become a tribal warlord
Then you have grown a big beard
You converted into an insurgent
Coming out in your true colors
As a warlord in islamic shape
A blood-thirsty murderer
A ruthless war profiteer
You have fired rockets
You destroyed houses
One of them was ours
You made me an orphan
Now it is time for peace
As otherwise, warlord
I shall grow up in the streets
And become a warlord like you
With no hope to build a nation
To kill the hope of children
To create a nation of orphans
Or at best to be a suicide bomber
A raw material for the terror factory
A fuel for the disastrous horror machine
Thereby continuing the cycle of war
For the sake of the orphan
Would you stop the war
Or you have no heart
For anything more than a war
One more appeal, warlord
Since you defy Allah’s word
Since you respect no life
Let me say you a final word
*For the sake of First July
Would you take a break
Would you stop shooting
Just for the day, warlord
Just a time out of your war game
To let one child survive one more day
To let a parent live one more day
To call 1st July as no orphan day
Or in one hand you make a speech
And fire a mortar bomb on the other